सीएनसी खोल्दै सेवा - लिमिटेड Anebon धातु उत्पादन कं,
सीएनसी खोल्दै सेवा
सीएनसी पार्दै पार्ट्स
मर कास्टिंग पार्ट्स
सीएनसी परिवर्तन के हो?
सीएनसी खराद एक उच्च-सटीक, उच्च-दक्षता स्वचालित मिसिन उपकरण हो। बहु-स्टेशन turret वा शक्ति turret संग सुसज्जित, मेशिन उपकरण प्रसंस्करण प्रविधिको व्यापक दायरा छ, यो रैखिक सिलेंडर, विकर्ण सिलेंडर, Arcs र यस्तो थ्रेड र grooves रूपमा विभिन्न जटिल workpieces, रैखिक रिजोल्युसन र परिपत्र अन्तर्वेशन संग प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ।
सीएनसी परिवर्तन मा, भौतिक बारहरू पनि चक आयोजना गरिन्छ र घुमाइयो र उपकरण विभिन्न कोण मा खुवाइन्छ छ, र धेरै उपकरण आकारहरू इच्छित आकार सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। केन्द्र खोल्दै र मिलिंग कार्यहरु छ जब, तपाईं अन्य आकारहरू को मिलिंग अनुमति परिक्रमा रोक्न सक्नुहुन्छ। यो प्रविधि आकार, आकार र सामाग्री प्रकार को एक किसिम को लागि अनुमति दिन्छ।
को सीएनसी खराद र परिवर्तन केन्द्र को उपकरण को turret मा माउन्ट छन्। हामी एक "वास्तविक समय" उपकरण (जस्तै अग्रगामी सेवा), जो पनि परिक्रमा रोक्छ र यस्तो ड्रिलिंग, grooves र मिलिंग सतहहरु अन्य कार्यहरु भन्छन् एउटा सीएनसी नियन्त्रक प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं सीएनसी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने, हामी सबैभन्दा सक्षम र competitively मूल्य निर्माताहरु मध्ये एक हो। उन्नत स्वचालित Lathes को 14 सेट संग, हाम्रो टोली सामान उत्पादन गर्न सक्छन् सही र समय। उत्पादन क्षमताहरु को विस्तृत श्रृंखला Anebon अद्वितीय नमूना भागहरु प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। हाम्रो ठूलो उत्पादन उपकरण हाम्रो लचीलापन र भरोसा सुनिश्चित गर्दछ। र हामी पर्याप्त कडे स्तर संग सेवा हरेक उद्योग को आवश्यकता पूरा हुनेछ। हामी गुणवत्ता र ग्राहक सेवा केन्द्रित छ।
सीएनसी खोल्दै भागहरु हामी निर्माण
हामी 10 वर्ष मा सीएनसी खोल्दै भागहरु को एक विस्तृत श्रृंखला उत्पादन गरेको छ र हाम्रो ईन्जिनियरिङ् टीम सधैं विनिर्माण सीएनसी खोल्दै भागहरु मा आफ्नो समस्या समाधान गर्न उपयोगी समाधान संग हाम्रो ग्राहकहरु प्रदान गरेको छ। हामी जटिल मिसिन मोड्युलहरू प्रयोग र मिसिन सञ्चालन गर्न एक कुशल सीएनसी खराद प्रयोग गरेर पनि जटिल भागहरु को मामला मा, लगातार उच्च गुणवत्ता मशीनिंग सुनिश्चित गर्नुहोस्। किनभने Anebon उच्च सटीक सधैं घेरने!
सीएनसी पार्दै मा मशीनिंग विकल्पहरु
हाम्रो नवीनतम र उच्च प्रदर्शन उपकरण को निर्वाचकगण संग सीएनसी परिवर्तन केन्द्र र 4-अक्ष खोल्दै मिसिन । हामी विनिर्माण विकल्प प्रदान गर्दछ। सरल वा जटिल भागहरु, लामो वा छोटो गरिएका सटीक भागहरु गरिएका कि, हामी राम्रो जटिलताओं को सबै स्तर लागि सुसज्जित छन्।
मध्यम ब्याच आकार को उत्पादन
निम्न कठोर सामाग्री सामान्यतः प्रयोग गरिन्छ: एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, तामा, नायलन, इस्पात, acetal, polycarbonate, एक्रिलिक, पीतल, PTFE, टाइटेनियम, ABS, पीवीसी, चरेस आदि
जर्मनी मा हाम्रो ग्राहक भ्रमण
युरोप बाट ग्राहकहरु Anebon भ्रमण
बाट कम्पनी फा जर्मनी भ्रमण ग्राहक ...
Anebon हार्डवेयर कं, लिमिटेड ISO900 प्राप्त ...
सटीक अनि शक्तिशाली सीएनसी मिसिन
Anebon मा कारखाना पर्यावरण
फोन: + 86-13509836707
ठेगाना: Rongtong Industrial Park,
एल्यूमीनियम कास्टिंग भागहरु , एल्यूमीनियम मरन कास्ट, जस्ता मर कास्टिंग भागहरु, एल्यूमीनियम कास्टिंग, कास्टिंग भागहरु , मर कास्टिंग भागहरु ,